Jooji lacag la'aan!
Fiiri Qolalka Jacuzzi >
Fletcher €25 actie 1, 2 ah 3 dagen (Tijdelijk!)
Waxaa intaa dheer, ka dib markii aad si raaxo leh u joogtid habeenka waxaad nagu soo biiri kartaa quraac ballaaran, bilow fiican oo maalintaada ah!
Diyaar ma u tahay inaad xoogaa nasato? Ballan u dhig hadda heshiiskan tartan ee imaanshahaaga illaa Nofeembar, ficilku waa xaq 3 ansax ah maalmo!
• 1, 2 ah 3 x joog habeen
• 1, 2 ah 3 x quraac ballaaran
• Baaskiil bilaash ah- iyo jidadka socodka
• WiFi lacag la'aan ah
fiiri & Ballan qaado hadda >
Qolalka Hoteelka ee Qiimaynta Sare leh oo leh Jacuzzi gaar loo leeyahay
✅ 2 Jacuzzi shaqsiyeed
>> Macluumaad dheeraad ah
Arag oo ...
Z ee Zeeland
Ter Own Ter ...
Ite Suite raaxo leh
B Musqusha Royal
✅ V ...
Ub Caag kulul
Bed Sariir weyn oo laba jibbaaran
Bathroom Musqul raaxo leh oo leh jacuzzi
Eigen riant terras m ...
Laga bilaabo € 47.0 ...
Ter Saqafka saqafka leh oo la arko godadka
Fletcher Hotel-Restaurant Carlton Naaldwijk South Holland
G Eey soo dhawow
Double Deluxe double ...
Fletcher City Hotel The Hague South Holland
Bed Sariirta Kingsize
Qolka Royal Suite
Laga soo bilaabo ...
Heshiisyada Qolka Jacuzzi ee la soo bandhigay
Huteelada Fletcher ee soo socda ee leh jacuzzi waxay leeyihiin qolal huteel iyo suuliyo leh jacuzzi, dabaylaha qolka ama dabaylaha.
Huteeladaani waxay ku yaalaan meel aad u qurux badan badanaana waxaa jira baarkin bilaash ah iyo wifi bilaash ah.
Guji isku xirka mid ka mid ah hoteellada hoose si aad u aaddo Fletcher Jacuzzi ama Whirlpool gaar ah ee bogga bixiya.
Waxaad arki doontaa qiimayaasha isla markiiba, helitaanka iyo macluumaad dheeraad ah.
Jacuzzi Rooms Gelderland
Fletcher Estate Hotel Holthurnsche Hof
Jacuzzi Rooms Waqooyiga Holland
Fletcher Hotel-Restaurant Nautical Quarter
Jacuzzi Rooms North Brabant
Jacuzzi Rooms South Holland
Fletcher City Hotel The Hague
Jacuzzi Rooms Zeeland
Qolalka Jacuzzi Drenthe
Qolalka Jacuzzi Utrecht
Jacuzzi Rooms Limburg
Qolalka Jacuzzi Groningen
Jacuzzi Rooms Friesland
Qolal huteel jaceyl oo leh jacuzzi gaar loo leeyahay oo ka yimid silsiladda hoteelka caanka ah Fletcher.
Arag soo jeedimaha >
Hotels.nl Qolalka Jacuzzi
Xulashada ugu fiican ee qolka hoteelka ayaa laga bixiyaa Huteelada.nl.
Qolalka Inntel Jacuzzi
van der Valk Jacuzzi Rooms
Heshiisyada Huteelka Qarsoodiga ah?
Haddii aad raadinayso dalabyada ugu fiican, talooyin, xeelado iyo qiimo dhimis qarsoodi ah oo loogu talagalay qolalka hoteelka ee Nederland, fadlan booqo barta walaasheen SecretHotelDeals.nl >>
Fletcher Jacuzzi Gaarka ah
Fletcher Hotels waxay la kulmeen Jacuzzi, Tuubada kulul ama Whirlpool
Ma ogeyd Hoteelada Fletcher sidoo kale waxay leeyihiin qolal hudheel oo kala duwan oo qaali ah iyo suuliyo leh jacuzzi labalaab ah qolka, qubeys xumbo qurxoon ama dabayl wacan?
Ku raaxayso adiga oo labadiinuba ku jira qolkii fayaqabka ee fayo -qabkaaga gaarka ah oo qolka ku leh jacuzzi, qolalka qaarkood waxay leeyihiin barxad gaar ah ama balakoon leh aragtiyo cajiib ah, waxaa laguu balan qaadayaa inaad joogto habeen gaar ah.
Hoteel leh jacuzzi qolka oo leh tas -hiilaad raaxo leh ayaa ah nasashada ugu dambaysa toddobaadyada shaqada ee mashquulka ah.
Qolalkayaga lagu taliyey Fletcher Jacuzzi
Ama guji badhanka hoose oo arag dhammaan dalabyada ka socda huteelka Fletcher oo leh jacuzzi ama dabayl.
Fiiri Fletcher Hotels >
Huteelada leh qolka sauna iyo Jacuzzi
Qolka gaarka loo leeyahay ee Sauna iyo Jacuzzi: Nooca raaxada ah!
Talaabo hore u soco, oo ku qor qolka suubban ee hoteel raaxo leh oo leh jacuzzi weyn oo gaar ah iyo sauna khaas ah qolkaaga si aad u hesho waayo -aragnimo fayoobi oo cajiib ah oo aan shisheeye lahayn.
Xitaa waxaa jira qolal huteel oo qurux badan oo leh barkad gaar loo leeyahay iyo jacuzzi wareegsan oo ballaaran.
Guji badhanka hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo dalabyo.
Baro Qolalka Sauna >
Van der Valk Jacuzzi Qolalka
Silsiladda hudheelka caanka ah ee Van der Valk waxaad ka heli doontaa hoteello badan oo raaxo leh oo jacuzzi weyn oo gaar ah qolka ku jira, qubeys qurux badan, sauna, fayoobaanta iyo xitaa barkad gaar loo leeyahay oo ku jirta qolkaaga oo leh jacuzzi wareegsan oo weyn.
Guji badhanka hoose oo arag dalabyada ugu fiican ee van der Valk.
Fiiri vd Qolalka Valk >
Hoteelada Farshaxanka Inntel Jacuzzi Rooms
Huteelada Inntel waxaa lagu yaqaan qubayska xumbo ee cajiibka ah, dabaylaha iyo qolalka jacuzzi.
Qubayska xumbada ugu quruxda badan 2021 Tusaale ahaan, waxba kama heli doontid Inntel Art Hotel Eindhoven.
Guji badhanka hoose oo soo hel silsiladdan hudheelka gaarka ah oo leh qolal hudheel oo qurux badan oo fiiro dheer u leh jacuzzi qolalka iyo isboortiga / tas -hiilaadka fayoobaanta ee hudheelka oo leh jacuzzi of Inntel.
Fiiri Hoteelada Inntel >
Habeen Qubays kulul leh
Qolka kulul ee kulul ee qolkaaga ku jira, halkaas oo labadiinuba aad ku raaxaysan kartaan biyaha diirran!
Qolalkaan hudheelka ayaa leh helitaan xaddidan Nederland.
Eeg Qolalka Tubbada kulul >
Sida loo ballansado Jacuzzi-Qolka-qolka Fletcher?
Qolka leh Jacuzzi Video Impression
Diyaar ma u tahay dhammaadka wiigga jaceylka ah??
Markaa naftaada ha lagu xannaaneeyo jacuzzi hoteel ama tubbada kulul ee qolka.
Hoteellada ayaa sidoo kale bixiya adeegyo caafimaad oo kala duwan, si aad sidoo kale si buuxda ugu nasato saunada hoteelka ama qubayska uumiga intaad ku jirto hoteelka.
La bax lammaanahaaga oo waqti qaado naftaada iyo midba midka kale.
Hoteelkaasi ha la yimaado jacuzzi u gaar ah qolka iyo subaxdii quraac macaan.
Mararka qaarkood waxaa xitaa jira hudheel leh barkad gaar loo leeyahay oo qolka dhexdiisa ah!
Maxaad Qolka Hoteelka ugu Ballansan Jacuzzi Gaarka ah?
Dooro hoteel ku yaal bartamaha dabeecadda si aad u hesho nasasho nasasho oo nasasho leh, ama ballanso hoteel ku yaal magaalo aad u buuqsan si aad ugu nasato jacuzzi -ka maalin wax iibsi kadib.
Hoteel leh jacuzzi qolka waxaad ku raaxeysan kartaa in yar oo raaxo dheeri ah, kaas oo hubiya nasashada guud.
Ku raaxayso maalin weyn agagaarka hoteelka, dhadhamin suxuunta ugu dhadhan fiican makhaayadda hudheelka kuna raaxayso jacuzzi qolkaaga hudheelkaaga.
Ma ogtahay inay sidoo kale jiraan qolal raaxo leh oo leh jacuzzi. Taasi waa xaflad.
Eeg Dhammaan Qolalka Jacuzzi >
Hoteelada Van der Valk oo leh Qubays Xumbo, Whirlpool ama Jacuzzi Qolka
Ma waxaad raadineysaa qol hoteel oo leh jacuzzi?
Kadib waxaad timid meesha saxda ah Van der Valk.
In badan oo ka mid ah huteeladayada waxay leeyihiin qol gaar ah oo leh jacuzzi.
Ku raaxayso hoteel leh jacuzzi qolka qiimo wanaagsan, dabaylaha ama qubeyska xumbo?
Ballan ku sii joog habeen halkan hoteelka van der Valk oo qolka ku leh jacuzzi >
Hoteellada leh QOL JACUZZI? HALKEEN KA HELI KARAA KUWAN?
Ma waxaad raadinaysaa jacuzzi huteel oo badda agteeda ah ama De Veluwe??
Boggayaga internetka way fududahay in lagu shaandheeyo dookhyadaada.
Sidan ayaad ku tilmaami kartaa inaad rabto qol huteel oo leh jacuzzi.
Iyada oo ku saleysan xogtan, kaliya hoteellada leh jacuzzi-qolka ama dabaylaha.
Sidan ayaad isla markiiba sawir cad uga helaysaa qolalka daboolaya baahiyahaaga, sida qolka hudheelka jacuzzi.
KU HADAL HOTELKA JACUZZI Qolka
Shinida Van der Valk waxaan fahamsanahay sida ay muhiimka u tahay in la nasto oo la nasto.
Taasi waa sababta aan u soo saarnay qaacido gaar ah oo laga hirgaliyay dhammaan hoteelladayada.
Sidan ayaad ku joogi doontaa raaxo iyo nasasho waxaanan hubinnaa inaad ka baxdo hudheelkayaga xitaa ka sii nasasho badan.
Waxaad si buuxda ugu nasan kartaa qolka hoteelka oo leh jacuzzi.
Ku raaxayso jacuzzi khaas ah qolkaaga qolkaaga gaarka ah, ama si bilaash ah u isticmaal tas -hiilaadka fayoobaanta raaxada leh sida dabaylaha, barkadda dabaasha, jirdhiska sauna.
Marka lagu daro qolka huteelka jaceylka leh jacuzzi, waxaa jira siyaabo kale oo badan oo lagu raaxeysto wanaag (mini) si aad ugu raaxaysato fasaxa.
Waad ku mahadsan tahay xiriirka wanaagsan ee aan la leenahay dalxiisyada iyo shirkadaha dalxiiska ee waaweyn, waxaan haysannaa xirmooyin kala duwan.
Tusaale ahaan, ka waran maalinta nasashada ee isboortiga?
Markaad ku soo noqoto hudheelkayaga oo leh jacuzzi qolka ka dib maalin madadaalo leh, waxaad si toos ah ugu fariisan kartaa makhaayaddeena.
Dhammaan hoteelladayadu waxay leeyihiin makhaayad leh liis ballaaran, markaa qof walba wax baa jira.
Dabcan waxaad ku laaban kartaa qolka hudheelkaaga oo leh jacuzzi casho ka dib si aad ugu nasato hoygaaga raaxada.
Fiidkii jaceylka oo aad ku hoydo hoteel qol jacuzzi ah… ma fiicnaan karto?
Dusha sare 10 waxaan dooranay qolalka hudheelka ugu raaxada badan oo leh jacuzzi ama dabaylaha qolka.
Sidan ayaad ku wada raaxaysanaysaan qofka aad jeceshahay ama saaxiibkaa ugu fiican(gudaha) ee fiidkii fayoobaanta nasashada leh!
HOTELKA JACUZZI QOLKA KU JIRA - TOP 10
Waxaan leenahay dusha 10 huteelada leh jacuzzi-qolka.
Dabcan waxaa jira xulasho aad u weyn oo ah hoteello kala duwan oo leh jacuzzi.
Isha ku hay boggan, maadaama aan si joogto ah ugu dari doonno hoteello iyo suuliyo leh jacuzzi-qolka.
1. HOTELKA MAINPORT - ROTTERDAM
Aad loo qiimeeyo oo raaxo leh 5 * Hoteelka Mainport ee Rotterdam waa meel fantastik u ah joogitaankaaga raaxada habeenkii.
Qolalka hoteelka ee ku yaal Hoteelka Mainport waxay qolka ku leeyihiin jacuzzi fiican.
> Akhri wax badan oo arag qiimaha & la heli karo
2. VAN DER VALK MIDDELBURG - TUB HOT & SUNNAHA QOLKA
Hoteelada Van der Valk dabcan waxaa loo yaqaanaa qolal raaxo leh oo jacuzzi qolka ku yaal.
Van der Valk wuxuu kaloo leeyahay 'suuli fayoobi' oo leh qubeys xumbo, sauna infrared iyo qubeyska roobka oo laba jeer ah.
3. INNTEL HOTELS ART EINDHOVEN - EINDHOVEN
Kaliya kuma seexanaysid qol huteel naqshad qurxoon leh, laakiin sidoo kale ku raaxayso jacuzzi -ka weyn ee qolkaaga ku yaal.
Qolka 'Art Jacuzzi' wuxuu leeyahay jacuzzi XL ah.
> eeg qiimaha & la heli karo
4. HOTEL THE TOREN - AMSTERDAM - QOLKA QOLKA QOLKA
Hotel The Toren ayaa loo doortay hoteelka ugu fiican Nederland ugu yaraan afar jeer.
Qolalka ugu raaxada badan waxay qolka dhexdiisa ku leeyihiin dabayl laba jibbaaran.
5. HOTEL DE REEHORST - EDE
Hotel de Reehorst ee Ede oo aad loo qadariyo wuxuu leeyahay dhowr qol oo huteel oo leh jacuzzi.
Tusaale ahaan, dooro qol raaxo leh oo leh jacuzzi iyo shaashadda TV -ga shineemada.
7. FLETCHER HOTEL LANGEWOLD - DRENTHE - TUB HOT / WHIRLPOOL QOLKA
Hoteelka wanaagsan ee Langewold wuxuu ku yaal kaynta.
Qolalka hoteelku waxay qolka ku dhex leeyihiin dabayl ama jacuzzi cajiib ah. Nasasho!
8. VAN DER VALK EMMEN - QOLAHA MAWDUUCA
Miyaad doorataa Afrika Suite, qolka Hollywood ama laga yaabee mid ka mid ah qolalka kale ee mowduucan leh?
Van der Valk Emmen wuxuu leeyahay qolal huteel oo raaxo leh oo jacuzzi ku jira qolka ama dabaylaha.
Doorasho ku filan!
9. HOTEL WAYN DHEERIGA - BUURAHA KU SAABSAN ZOOM
Grand Hotel de Draak waa hoteelka ugu faca weyn Nederland, laakiin laga yaabee sidoo kale mid ka mid ah hoteelada ugu nasashada badan dalka. 'Superior Suites' kaliya maahan qurux, laakiin sidoo kale qolka ku hays jacuzzi.
10. HOTEL VILLA DE KLUGHTE - DEGMADA BADDA - 2 QOFKA JACUZZI Qolka
Hotel Villa de Klughte wuxuu leeyahay meel aad u qurux badan oo leh aragti ka badan xeebta ama godadka! Labada qol iyo qolalka sare labaduba waxay leeyihiin a 2 qof jacuzzi.
Waa maxay huteel leh jacuzzi khaas ah?
U ogolow naftaada inaad ku raaxaysato hoteel jaceyl oo leh jacuzzi khaas ah.
Bal qiyaas, waa bartamihii jiilaalka, adiga iyo qofka aad jeceshihiin waxaad maqnaan doontaan dhammaadka wiigga.
Hadda uun baad soo gashay bannaanka beer qurux badan, jacuzzi qaas ah oo diirran oo qaali ah ayaa ku sugaya adiga iyo lamaanahaaga.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad furto dhalo wanaagsan oo xumbo ah oo aad ku raaxaysato nabadda, diirimaadka iyo midba midka kale.
Haddii aad doorbideyso qubeyska xumbo dabiici ah, markaa tubbada kulul ee qoryaha lagu shido ayaa laga yaabaa inay wax kuu noqoto.
Suite leh jacuzzi khaas ah qolkaaga hudheelkaaga sidoo kale waa raaxo cajiib ah, si aanad guriga uga bixin.
Waa maxay qiimaha jacuzzi gaar loo leeyahay?
Qiimaha jacuzzi gaar loo leeyahay wuxuu u dhexeeyaa € 79,00 in € 704,00 loogu talagalay 2 dadka habeenkii.
Huteelku wuxuu bixiyaa qolal leh dabayl
Ma jeclaan lahayd qol huteel oo leh jacuzzi inta aad ku meel gaarka tahay ee dalkeena quruxda badan?
Markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah ee HotelBubbelBad.nl!
Bogan waxaad inta badan ka heli doontaa huteelo, qaar badan ama qaar ku qalabaysan jacuzzi khaas ah.
Taasi waa qubeys aad u fiican oo cabitaan ah oo ku yaal hoteel Nederland ah oo aad dooratay.
Xaaladaha badankood, waxay quseysaa qol huteel raaxo leh oo ku yaal a 3- ama huteel 4-xiddigle ah oo ku yaal waddankaaga.
Goobaha badankood waxaa laga helaa waqooyiga dalka, halkaas oo aad ku jiifsan karto jacuzzi.
Ma u socotaa waayo -aragnimo caafimaad oo dhammaystiran oo qol huteel oo leh qubays xumbo kuguma filna, markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku hoydo hudheel caafimaad oo caadi ah.
Habeenno khaas ah ayaa la seexanayaa qolalka hudheelka raaxada leh
Waxaan ku hoyanaynaa hoy habeyn gaar ah oo hudheel ah oo qolka jacuzzi ah.
Tani waa suurtogal, tusaale ahaan, gobollada Drenthe, Overijssel, Groningen, Utrecht iyo Limburg.
Ka warran qol huteel raaxo leh oo ku yaal hudheelka yar-yar Het Heerenhuys ee Ruinerwold ee Drenthe, ama qol leh laba jacuzzi oo ku yaal Groningen Hotel Resort Landgoed Westerlee?
Almelo iyo Limburgs Ku dhashay Overijssel sidoo kale waxay leeyihiin huteelo u ballan qaada madadaalo xumbo laba.
Marka ma rabtaa inaad dhaqso u baxdo oo ma waxaad raadinaysaa qol huteel oo leh jacuzzi, fiiri dalabkayaga kore oo dhaqso ula yaab qofka aad jeceshahay foomkan gaarka ah ee joogitaanka habeenka!
Miyaad rabtaa inaad ku raaxaysato khibrad jaceyl oo aad u sareysa mise waxaad raadinaysaa hoteel aad u jaceyl munaasabad jaceyl oo gaar ah: Valentine ama sanado badan oo guurka ah?
Markaas qol huteel leh jacuzzi waa fikrad wanaagsan!
Qolalka hoteelka ee leh jacuzzi badanaa waa qolalka hudheelka ugu raaxada badan hoteelka.
Ka sokow jacuzzi gaar loo leeyahay, kuwani waxay ku qalabaysan yihiin sariir cabbirkeedu yahay boqorka iyo alaab raaxo leh.
Si kooban, wax walba waxay u joogaan joogitaan jaceyl oo heer sare ah. Hoos waxaa ah 13 qolalka hudheelka ugu caansan oo leh jacuzzi ee Nederland.
Raadinta qol huteel oo leh jacuzzi? Waxaan ku talinaynaa hoteelada ugu fiican.
Talo! Hotel de Wageningse Berg aad baa loogu taliyay! Ama ka waran guri fasax leh jacuzzi? Aad u macaan oo badan oo asturan.
Hotel Stadhouderlijkhof: 2 suites waxay la kulmeen jacuzzi
Caan ah oo raaxo leh Hotel Stadhouderlijkhof wuxuu ku yaal bartamaha Leeuwarden.
Kani wuxuu ahaa qasri qarnigii 18aad oo ay lahaayeen qoyska boqortooyada, laakiin hadda waxaa deggan martida qasriga. Laakiin xiisaha boqornimadu wali waa ka muuqataa meel kasta, labadaba maqaayadda, barxadda taariikhi ah oo leh barxad iyo waliba qolal huteel oo si hufan loo qalabeeyay. Sababtoo ah qasrigii hore ma laha wax ka yar 2 suites leh jacuzzi wareegsan oo aad ku seexato sariir dhab ah oo afar-boodh ah! Ku fiican fasaxa jaceylka ee ka fog.
Talo! Buugga mid ka mid ah 2 qolalka leh jacuzzi wareegsan iyada oo loo marayo mareegaha rasmiga ah ee Fletcher Hotel Stadhouderlijkhof
Ku seexo qol sare oo leh qubeys ballaaran.
Xiddiga 4 Fletcher Hotel Oss waa cinwaan aad u fiican oo qurux badan oo ku yaal meel u dhow Den Bosch.
Ku habboon dukaamaysiga, laakiin sidoo kale kaydka dabeecadda De Maashorst ayaa ku dhow.
Halkaan waxaad ku wadi kartaa baaskiil iyo socod la'aan.
Ka dib waa wax cajiib ah inaad guriga ku timaaddo mid ka mid ah qolalka hudheelka hudheelka ah ee raaxada leh ee Hotel Oss!
Ma waxaad raadineysaa raaxo sare?
Ka dibna ku ballanso qolka hudheelka ka sarreeya jacuzzi, kaas oo si casri ah loo qalabeeyay, wuxuu leeyahay sariir cabbir boqor ah, qubeys waasac ah iyo roob roob raaxo leh. Cunto wanaagsan ayaa suurtogal ka ah makhaayadda Bar Bistro DuCo.
Talo! Ku ballanso qol sare oo leh qubeys raaxo leh iyo qubayska roobka adoo adeegsanaya bogga rasmiga ah ee Fletcher Hotel Oss
Qolka hoteelka oo leh jacuzzi: Hotel Reehorst
Xiddiga 4 Hotel de Reehorst wuxuu leeyahay wax walba hal saqaf hoostiisa: tiyaatar, makhaayad, bar raaxo leh iyo teras.
Madadaalo badan. Haddii aad raadinayso meel iyo dabeecad, goobtu waa ku habboon tahay!
Hotel de Reehorst wuxuu ku yaal bartamaha dabeecadda quruxda badan ee Veluwe! Fiican!
Waxaad ku nasan kartaa qolalka super-deluxe, dhammaantood waxay leeyihiin jacuzzi qurux badan.
Waa kuwee qolka hudheelka leh qol jacuzzi ah oo aad doorato: ee New York, ee Venice, ka yimid Ibiza ee Milyaneerka suite?
Waa kuwee 9 qolalka aad adigu doorato, raaxada iyo jaceylka waa la damaanad qaaday.
Aroortii hore waxaad ku raaxaysan kartaa quraacda raaxada leh ee Makhaayadda Miami. Faallooyinka ku saabsan Zoover waa kuwo aad u fiican!
Eeg qiimaha halkan
Ku buufinta Wageningse Berg
Ma waxaad raadinaysaa meel aad u qurux badan oo qurux badan oo ku taal badhtamaha cagaarka, markaa waxaan ku talin karnaa Hotel de Wageningse Berg, oo ku yaal Wageningen Berg!
Hoteelku wuxuu leeyahay naqshad gaar ah oo sababta oo ah meesha ay ku taal dusha Wageningse Berg waxaa lagugu daaweyn doonaa aragti cajiib ah oo ku saabsan daadadka iyo Betuwe..
Waxaad si fiican ugu seexan kartaa qolalka hudheelka raaxada leh ee jacuzzi, waxaad ku cuni kartaa makhaayadda ama naxaasta.
Ama ka waran Xarunta Fayo -qabka oo leh sauna Finnish ah, Qubayska Turkiga iyo Jacuzzi? Macaan!
Talo! Ku ballanso qol raaxo leh websaydhka rasmiga ah ee Hotel de Wageningse Berg
Ku cabitaanka Gooimeer
Waxay si toos ah ugu taal Gooimeer Fletcher Nautical Quarter.
Naqshaddu waa astaanta Quarter -ka Badda.
Hoteelku wuxuu u eg yahay tuulo kalluumeysi marka loo eego hoteel! Dhismayaal kala duwan, lagu dhisay jawi badeed, si wadajir ah u sameeya hoteelka.
Dhismaha weyn waxaad ka heli doontaa makhaayad, teras iyo qol khamri.
Qolalka hoteelku waxay ku yaallaan dhismayaal kala duwan.
Waxaa jira (joogto ah) Qolal, laakiin waxaad sidoo kale dooran kartaa suite Royal oo leh aragti.
Qolkani wuxuu leeyahay musqul furan oo raaxo leh oo ku qalabeysan qubeys xumbo weyn leh, sariiro raaxo leh iyo muuqaal qurux badan 'Gooimeer'.
Talo! Ku ballanso qol raaxo leh websaydhka rasmiga ah ee Fletcher-Nautisch Kwartier
Ku raaxayso aqal leh jacuzzi
Waxba ma jiraan?
Meel xasilloon oo fiican oo ku taal guri wanaagsan oo leh sauna infrared, meel dabka lagu shito iyo jacuzzi 2 qof ah?
Waa suurtogal haddii aad joogto Relaxing in de geeska dambe ..
Kani waa baarkin yar oo leh guryo yar, kuwaas oo lagu dhisay qaabka caadiga ah ee Achterhoek oo leh xirmooyin guduudan iyo caddaan ah.
Guryo badan ayaa la ballansan karaa, laakiin haddii aad raadinayso joogitaan jaceyl laba, markaa waxaan ku talinaynaa guriga 2-qof oo leh jacuzzi 2-qof ah qolka jiifka weyn, saunada iyo dabka oo leh laba kursi oo jacayl!
Guryaha kale sidoo kale waxay leeyihiin qubays kulul oo qoryo lagu shido iyo sauna.
Intee in le'eg ayaad rabtaa inay noqoto? Sauna infrared ah, dabka iyo jacuzzi, dhammaantood meel deggan oo raaxo leh. Ku sii soco Achterhoek.
Naqshadeynta qolka hoteelka oo leh jacuzzi
Shanta xiddig Mainport Design Hotel ayaa ku habboon in jaceylka la hormariyo.
Qurxinta waa heer sare oo raaxo leh, nasasho iyo hudheelka ayaa sidoo kale leh spa qurux badan.
Qolalka hoteelka ayaa sidoo kale qurux badan, gaar ahaan haddii aad doorato 'qolka hudheelka oo ku yaal barkadda biyaha'.
Halkan waxaa ah jacuzzi weyn (1.70 m dhexroor) midigta daaqadda horteeda waxaadna ku leedahay aragti weyn dekedda Rotterdam.
Musqusha oo leh qubeys soo-galitaan ah iyo sauna khaas ah ayaa dhammaystiraya waayo-aragnimada fayoobaanta qolka huteelkan oo leh jacuzzi.
Talo! Firfircoon dhexda godadka
Fletcher Boutique Hotel Duinoord wuxuu ku yaal godadka Wassenaar oo kaliya 15 daqiiqado ayay xeebta ka lugeeyaan.
Neef hawo ah qaado oo soco kadibna fadhiiso mid ka mid ah taambuugyada xeebta.
Laakiin waxaad sidoo kale booqan kartaa astaamaha a la carte makhaayadda Hotel Duinoord!
Waxaa sidoo kale jira bar raaxo leh iyo barxad waasac ah oo leh aragtida godadka.
Talo! Boek een luxe bruidssuite via de officiële website van Fletcher Boutique Hotel Duinoord
De prijs-kwaliteitverhouding is erg goed. Voor minder dan € 100, – kunt u al een hotelkamer met bubbelbad boeken. Huteelkan ayaa aad loogu talinayaa.
Dhaldhalaalaan suite Champagne ah
Ma rabtaa inaad dhowr maalmood la qaadato qofka aad jeceshahay?
Markaa waan awoodnaa Van der Valk Breukelen ku talin!
Halkaan waxaad ka heli doontaa qolal raaxo oo kala duwan oo leh tubbo kulul oo gaar loo leeyahay.
Suugaanta champagne iyo Junior suite aad baa loogu taliyaa!
Marka lagu daro qubeyska xumbo, qolka hudheelka ka sarreeya oo leh jacuzzi wuxuu kaloo leeyahay qubeyska roobka iyo barxad qurux badan.
Laakiin Van der Valk Breukelen wuxuu kuu hayaa xitaa waxyaalo kale oo la yaab leh; waxaad ku isticmaali kartaa tas -hiilaadka fayoobaanta kale ee hoteelka lacag la'aan.
Way fiicantahay in la ogaado Utrecht iyo Amsterdam labadaba si fudud ayaa loo heli karaa.
Eeg qiimaha iyo qolalka hoteelka halkan
Qol hudheel raaxo leh oo leh jacuzzi iyo saqafka iftiimay
Van der Valk Hotel Arnhem wuxuu u dhow yahay Arnhem, Veluwe sidoo kale waa dhow yahay!
Waxaad ku raaxeysan kartaa sauna iyo qubeyska Turkiga.
Casho qoto dheer, fadhiiso makhaayadda à la carte.
Marka cimiladu fiican tahay, waxaad sidoo kale ku nasan kartaa barxadda.
Laakiin hadda ugu quruxda badan, raaxada 'Glamor Loft'.
waasac ah, Suite raaxo leh oo dhadhan fiican leh oo leh sariir raaxo leh iyo musqul leh jacuzzi iyo saqafka iftiimay.
Haddii aad ballansato 'Loft', waxaa lagugu soo dhaweyn doonaa goobooyin markaad timaadid.
Wow! Qol huteel oo leh jacuzzi waasac ah
Warshadaha, farshaxan iyo mid gaar ah. Taasi waa Hoteelada Inntel Farshaxanka ee Eindhoven, qayb ahaan waxay ku taallaa dhismaha warshad weyn ee Philips.
Marka warshadu 1909 waa la dhisay, cidina ma malayn karin in dhismahani uu ahaan doono Hotel Huteel in ka badan qarni ka dib.
Naqshadayaasha iyo nashqadeeyayaasha ayaa huteelka oo dhan u rogay shaqo farshaxan oo dhab ah.
Waxaad dareemeysaa warshaddii hore, laakiin iska qiyaas naftaada raaxo casri ah oo nasasho leh. Dhowr habeen oo halkan ah ayaa loo dammaanad qaaday inay tahay khibrad gaar ah.
Talo! Qolka hoteelka oo leh jacuzzi iyo balakoon
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-Eindhoven waa meesha ugu habboon dadka jecel dabeecadda iyo kuwa raadinaya xasilloonida, laakiin Eindhoven sidoo kale waa u dhow yahay.
Soo ogow kaydadka dabeecadda ee ku xeeran, baaskiil wad oo ku soco aagga oo galabtii wax ka iibso Eindhoven.
Intaa ka dib waa wax cajiib ah inaad guriga ku timaaddo qolka suugaanta leh oo leh sariir cabbirkiisu yahay boqorka, tv -ga flatscreen, raadiyaha iyo mashiinka Nespresso.
Musqusha raaxada leh waxay kaloo leedahay qubeys qurux badan iyo jacuzzi ballaaran oo balakoonka ku yaal. Halkaan waxaad ku xumbayn kartaa nabad iyo si gaar ah!
Lagu taliyay! Ku qor buugga raaxada adoo adeegsanaya websaydhka rasmiga ah ee Fletcher Jagershorst
Xitaa cinwaano badan oo leh jacuzzi qolka hoteelka?